Mpanamboatra kaody QR: Ahoana ny fomba famolavolana sy fitantanana ireo kaody QR tsara tarehy ho an'ny nomerika na fanontana | Martech Zone
Mpanamboatra kaody QR: Ahoana ny fomba famolavolana sy fitantanana ireo kaody QR tsara tarehy ho an'ny nomerika na fanontana
Talata, Martsa 1, 2022 Talata, Martsa 1, 2022 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia manana lisitry ny mpanjifa maherin'ny 100,000 izay naterin'izy ireo saingy tsy manana adiresy mailaka hifandraisana aminy. Afaka nanao append mailaka izay nifanaraka tsara (amin'ny anarana sy adiresy mailaka) izahay ary nanomboka ny dia tonga soa izay tena nahomby. Ireo mpanjifa 60,000 hafa dia izahay mandefa carte postale miaraka amin'ny fampahalalana momba ny famoahana vokatra vaovao.
Mba hampandeha ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra dia ampidirinay ny a QR code izay manana fanaraha-maso UTM amin'izany mba ahafahantsika manara-maso ny isan'ny mpitsidika, ny fisoratana anarana ary ny fiovam-po avy amin'ny fanentanana mailaka mivantana. Tamin'ny voalohany, nihevitra aho fa dingana tsotra izany, fa ny fampidirana kaody QR mifototra amin'ny vector dia olana kokoa izay noheveriko. Toy ny amin'ny fanamby hafa rehetra, misy ny vahaolana… QR Code Generator.
Misy fampiasana maromaro ny kaody QR ankoatry ny mailaka mivantana ataonay, azonao atao ny mampiditra ny kaody QR amin'ny:
Manomeza kaody tapakila na fihenam-bidy.
Manamboara vCard ho an'ny mpitsidika mba hisintona ny antsipirian'ny fifandraisanao.
Rohy amin'ny PDF an-tserasera.
Sokafy feo, horonan-tsary na fitsangatsanganana an-tsary amin'ny Internet avy amin'ny famantarana.
Mangataha naoty na manangona hevitra.
Omeo sakafo tsy misy fikasihana ho an'ny trano fisakafoanao (tena malaza io nandritra ny areti-mifindra).
Misoratra anarana amin'ny SMS.
Omeo kaody QR manokana momba ny hetsika ho an'ny fitaovana fanontana nozarainao.
Ny tsara indrindra dia azonao atao ny manara-maso ny fampiasana ny kaody QR anao ary ampiana fanaraha-maso ny fanentanana amin'ny URL ihany koa. Tsy namidy tamin'ny kaody QR foana aho satria nitaky ny hisintonana fampiharana mandritra ny fotoana maharitra izy ireo, fa ankehitriny ny mpamaky kaody QR dia mandeha ho azy amin'ny iPhone sy Android rehefa mampiasa ny fakantsary ianao. Izany no mahatonga azy ireo hahafinaritra raha ampidirina na aiza na aiza manana fitaovana finday ny mpampiasa anao ary tianao ny hifanerasera amin'izy ireo amin'ny nomerika.
QR Code Generator dia vokatry ny Bit.ly, iray amin'ireo sehatra fanafohezana URL malaza indrindra. QR Code Generator dia vahaolana tokana ho an'ny mpivarotra, ny kinova Pro dia misy:
mitantana - azonao atao ny mitantana ny kaody QR rehetra avy amin'ny sehatra afovoany iray, izay ahitana ny fahafahana manisy marika sy mitantana ny kaody tsirairay ao anaty lahatahiry manokana.
miara-miasa - azonao atao ny manampy mpikambana ao amin'ny ekipa miaraka amin'ny fidirany manokana ary miara-miasa amin'izy ireo amin'ny famolavolana na mizara ny tatitra.
Designer - Ny mpamorona dia intuitive, ahafahanao mamolavola Kaody QR azo zahana tanteraka izay mampiditra loko, marika (logo) ary fanamboarana antso ho an'ny hetsika.
fiantsonana Pages - ny kaody QR dia manana pejy fipetrahana namboarina natao haseho amin'ny finday, tablette, na desktop.
Short URL – Ny sehatra dia misy URL shortener tafiditra ao ka tsy mila manahy momba ny fanafohezana ny URL ianao alohan'ny hampiasana ny sehatra.
Analytics - ny isan'ny scan kaody QR dia tafiditra ao amin'ny sehatra ary azonao atao ny manondrana ny angon-drakitra amin'ny rakitra CSV.
Vector - Te hampiasa ny kaody QR amin'ny fanontana? Tsy misy olana - afaka misintona ny kaody QR amin'ny endrika maro ianao - ao anatin'izany ny PNG, JPG, SVG, na EPS (mainty sy fotsy tsy misy endrika fanampiny).
API – Te hampiditra API amin'ny sehatrao ve ianao? Manana API REST feno izy ireo amin'izany!
Vokatra mpamokatra kaody QR
Ity misy kaody QR namboariko tao anatin'ny minitra vitsy ho an'ity lahatsoratra ity. Mazava ho azy fa mety mamaky izany amin'ny fitaovana finday ianao ka ny tena URL dia eo ambany bokotra iray. Fa raha mijery an'io eo amin'ny biraonao ianao dia atoroy fotsiny ny findainao amin'ny kaody QR miaraka amin'ny fitaovana rehetra ary ho hitanao fa afaka manokatra avy hatrany ny URL alehanao ianao.
Misoratra anarana amin'ny fitsapana QR Code Generator maimaim-poana
Fampahafantarana: Mampiasako ny rohy ifandraisako amin'i QR Code Generator ao amin'ny kaody QR sy ny lahatsoratra.
Tags: Bit.lyfamolavolana qr codemail mivantanaiOSiPhonekaody qr logomitantana ny kaody qrfinday-barotraPhotoshopPrintQR CodeMpanamboatra kaody QRLoko kaody QRMpamorona kaody QRQR Codesshortcodesmpanafoana url
WordPress: Mampiasa jQuery hanokafana varavarankely LiveChat amin'ny fipihana rohy na bokotra mampiasa Elementor